VeLondon parizvino vangangoshandisa vamiririri vekufambisa kupfuura denda risati raitika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » VeLondon parizvino vangangoshandisa vamiririri vekufambisa kupfuura denda risati raitika
Vafambisi vekufambisa vanga vari magamba asina kutaurwa edenda - kushanda kwemwedzi yakawanda pasina mubhadharo, kudzoreredza, kudzosera uye kurongazve zororo revanhu.
Kuvhiringika kwakatenderedza kunogara kuchichinja COVID-inoenderana nemirairo yekufamba kuri kusundidzira vagadziri vezororo mune dzimwe nzvimbo dzenyika kune vafambisi vekufamba vanogona kuvaraira nemazvo, pane kuisa njodzi yekuzvikanganisa nebhuku reDIY, rinoburitsa tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London. .
VeLondon ndivo vane mukana wekutendeukira kunyanzvi dzekufambisa, uye vanopfuura mumwe muvashanu vachiti vachashandisa mumiriri kubva zvino zvichienda mberi, inoratidza WTM Indasitiri Report yakavhurwa kuWTM London, chiitiko chinotungamira chepasi rose cheindasitiri yekufambisa, chiri kuitika pamusoro pe mazuva matatu anotevera (Muvhuro 1- Chitatu 3 Mbudzi) kuExCeL - London.
Pawakabvunzwa: Ko nyonganiso yekufamba yakakonzerwa nedenda iyi yaita kuti iwe uwedzere mukana wekubhuroka zororo remangwana kuburikidza nemumiriri wekufamba? 22% yeveLondoners vakati 'vanogona' kuita kudaro, vachiteverwa ne18% muScotland neWales.
Zvichakadaro, 12% yevakapindura kubva kuYorkshire neHumberside uye 13% kubva kuNorth East neSouth East (kunze kweLondon) vakati vangango shandisa mumiriri wekufamba, inoratidza chirevo chevatengi ve1,000 UK.
Vari pasi pemakore makumi mana nemana vanogona kubhuka nemumiririri kubva pakatanga dambudziko reCOVID, ne44% ye20-18s; 21% ye21-22s uye 24% ye22-35s vachiti vaizobvunza mumiririri.
Izvi zvinofananidzwa ne13% ye45-54s, 12% ye55-64s uye 14% yevanopfuura makumi matanhatu neshanu vakati vanokwanisa kubhuka nemushandi wekufamba kubva denda risati rasvika.
Mukuru weWTM London Exhibition, Simon Press akati: "Mbairo dzekutsvagisa inhau dzakanaka kune vamiriri vekufamba. WTM London yanga ichitaura kwenguva yakareba kuti vamiririri vekufambisa vari pano kuti vagare.
"Vashandi vekufambisa vanga vari magamba asina kufarirwa nedenda - vachishanda kwemwedzi yakawanda vasingabhadhare, kudzoreredza, kudzosera uye kurongazve zororo revanhu.
"Vakafanirwawo kuramba vari pamusoro pemitemo inogara ichichinja - kwete chete kuti inyika dzipi, kana dzaive, pane yakasvibira, amber kana tsvuku runyorwa, asiwo kuti nyika idzi dzakavhurirwa vashanyi vekuUK uye kuti varipo. iyo Foreign Commonwealth uye Development Office (FCDO) runyorwa rwenzvimbo 'dzakachengeteka'.
"Pamusoro pezvo, vamiririri vanofanirwa kuenderana nemitemo pabvunzo dzeCOVID uye zvinodiwa zvekupinda kune dzimwe nyika. Hazvishamisi kuti vamiririri vanotiudza vese vari kushanda nesimba kupfuura nakare kose.
“Maajenti mazhinji aitawo zvikumbiro kubva kuvanhu vasina kubhuka navo – avo vakabhuka zvakananga kukambani yavakazotadza kuibata pakaita chimwe chinhu chakaipa, kana kuita bhuku reDIY ndokushaya basa.
"Chokwadi chekuti vanhu vari kunzwisisa uye kukoshesa kukosha kwevamiririri chinhu chikuru kuona."
VeLondon parizvino vangangoshandisa vamiririri vekufambisa kupfuura denda risati raitika - YouLead NewsHub anoti:
[…] Nyaya yakazara pano […]